90 % -n’i Madagasikara No Tsy Mandray Afa-tsy 2 Dolara Isanandro. Fa Nahoana? · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Danielle Martineau
Voadika ny 11 Oktobra 2013 14:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, Português, Français
Roa volana latsaka alohan'ny fotoana kasaina hanaovana ny fifidianana ao amin'ny firenena, mbola maro ireo fanontaniana mikasika ny hoavin'i Madagasikara. Tamin'ny fizarana voalohan'ny fanadihadihana nataonay momba ny krizy Malagasy dia niresaka momba ireo sakana ara-politika mibahana ny famahana maharitra ny olana izahay. Amin'ity fizarana faharoa ity kosa isika dia hiresaka ny fitontonganan'ny fiainana sosialy sy ara-toekarenan'ny nosy; ny antony (izay tsy voatery ho araka ny eritreritry ny sasany); sy ireo vahaolana tokony hosaintsainina.
Tsenan'i Toliara – Nalaina tao amin'ny Wikimedia CC-NC-BY 3.0
Fikatsoana politika sy fitontonganan'ny toekarena
Misy fifandraisany akaiky ny krizy ara-politika sy ny fitontonganana tampoky ny toekaren'i Madagasikara. Na izany aza, tsy ampy hanazava feno ny fahantrana goavana misy ao amin'ny firenena ireo efa-taona nikatsoana ireo, fa hojerentsika ny amin'izany atsy aorana kely. Tsy azo lavina ny vokatry ny krizy politika eo amin'ny vahoaka. I Madagasikara no firenena mahantra indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny 90 isanjaton'ny vahoakany izay mampidi-bola latsaky ny 2 dolara isanandro. Efa naharitra efa-taona io tetezamita io ary mbola mitohy izany ka manimba ny vahoaka izay maika amin'ny hialan'ny adihevitra avy amin'ny ” iza no hitondra” mankany amin'ny “ahoana no ialantsika amin'ity krizy ity”, tahaka ny haseho anatin'ity lahatsary eto ambany eto ity [fr]:
Tsy azo hiadian-kevitra ireo antontan'isa: mampalahelo ny vokatry ny krizy politika eo amin'ny vahoaka Malagasy [fr] ary nampiditra ny ankamaroan'ny mponina tanatinà fahantrana tsy hita ho hazavaina. Milaza amin'ny antsipirihany [fr] ireo faritra samihafa voakasik'io krizy io ny tatitry ny Banky Iraisam-pirenena [fr]:
Le nombre d'enfants non scolarisés a peut-être augmenté de plus de 600.000. La malnutrition aiguë des enfants reste un problème critique. Dans certaines zones, elle a augmenté de plus de 50%. De nombreux centres de soins de santé ont été fermés [..] les recettes fiscales sont en baisse, la fraude fiscale a augmenté, et la capacité à maintenir le niveau des dépenses globales est remise en cause [..] 60% de la récolte de riz est menacée. La crise politique représente un obstacle à la mise en place d'une réponse appropriée.
Nitombo ho efa 600.000 mahery ny isan'ireo zaza tsy mandalo fianarana. Mijanona ho olana lehibe ny tsy fahampian-tsakafo henjana mahazo ny zaza, nitombo ho 50 isan-jato mahery izany tany amin'ireo faritra sasantsasany. Toeram-pitsaboana maro no nakatona [..] mihena ny vola azo amin'ny hetra, nitombo kosa ny hosoka amin'ny hetra, ary nihena ny fahafaha-mitazona ny haavon'ny fandaniana amin'ny ankapobeny [..] 60 isan-jaton'ny voka-bary no tandindonin-doza. Vato misakàna ho an'ny fametrahana valinteny sahaza amin'izany ny krizy politika.
Tena namotika ny firenena ny krizy (sy ireo m'adraikitra amin'izany), fa tsy hita anatin'ity faharavana lehibe ity ireo tena anton'ny fitontonganan'ny firenena sy ny fahantrana. Satria tokoa, efa nanjaka teo amin'ny firenena taloha lavitra ny 2009 ity fahantrana lalina ity.
Ireo anton'ny krizy sy ireo vahaolana azo eritreretina
Misy Fikarohana iray notarihan'i Mireille Razafindrakoto, François Roubaud sy Jean-Michel Waschberge miverina mandinika ny tantaran'ny toekarenan'i Madagasikara tanatin'ny 50 taona mahery ary mikasa ny hamoaka ireo antony mahatonga ny tsy fahatomombanana maharitry ny toekarena. Io lahatsoratra io, izay mitondra ny lohateny hoe “L'enigme et le paradoxe” (Ny ankamantatra sy ny paradoksa ) [fr] dia manambara fa tsy misy ireo antony manokana voafaritra mety afaka hanazava ny fitontonganan'ny firenena, fa ny tsy fahatomombanana ara-tsosialy miverimberina kosa dia vokatry ny fitsinjarazaran'ny sokajy sy ny tsy fihetsehana manoloana ny hevitra hivoarana mankany aminà fiarahamonina miray kokoa ( (eto ny fijerena ilay fikarohana iray manontolo amin'ny endriny PDF) [fr].
Ny ankamantatra Malagasy: Fampisehoana an-tsary ny Fitomboan'ny arin-karena Faobe an'ireo firenena Afrikana samihafa ( sary nalaina tamin'ny fanehoana ampahibemaso ilay fikarohana )
Ny tena marina dia mifantoka amin'ny firehana voajanahary manoloana ny fampivangongoam-pahefana sy ny fironan'ireo manam-pahefana samihafa ao anatin'ny fiarahamonina Malagasy mba hanomezana ny fahefana ho an'olon-tokana io fikarohana io. Io karazanà fakàna fahefana io, miaraka amin'ny fitomboan'ny fitokana-monin'ireo avara-pianarana raha oharina amin'ny sisan'ny firehan'ny firenena dia manome toerana ny tsy fahamarinan-toerana ara-politika ary mampametra-panontaniana momba ny “fanesoram-pitokisana” amin'ireo andrim-panjakana. Araka izany, izao no lazain'ilay fikarohana [fr]:
Ny vokatr'ireo singa ireo dia ny fisianà hantsana lalina manelanelana ireo avara-pianarana sy ny vahoaka. Any amin'ireo tanàn-dehibe, misitraka ny fari-piainana mampifanakaiky azy ireo amin'ny vahoakan'ireo firenena mandroso (ireo “avara-pianarana voatefin'ny fanatontoloana”) ny vondron'olona tena vitsy manana tombontsoa manokana, raha ny ankamaroan'ny mponina kosa mbola miaina amin'ny sakafo tapa-kibo sy mbola voatàna ao anatin'ny fandriky ny fahantrana. [..] Eny tokoa, tsy “voafatotra” tanteraka na anatin'ny rafitra politika na anatin'ny rafitra ara-toekarena ireo tantsaha Malagasy sy ireo mpiasa tena amin'ny sehatra tsy manara-dalàna, na eo aza ny fanekena (na ny fanohanana sarintsariny) atolotr'izy ireo ny mpitondra ny Fanjakana. [..] Anivon'ireo firenena ametrahana ireo fanontaniana mitovy ireo, ny fanekena ireo andrim-panjakan'i Madagasikara (fitsarana, mpiandro filaminana, mpandraharahan'ny fanangonan-ketra) no hita ho marefo indrindra. Io tranga io, izay mampiahiahy manokana, dia manaporofo ny halalin'ny fahapotehan'ny fifampitokisana ao anatin'ny Fanjakana.
Ny fanadihadiana notarihin'I Charlotte McDonald, amerikanina mpikaroka, dia manohana ny hevitra mikasika ny fitohizan'ny fitomboan'ny hantsana misy eo amin'ny ireo avara-pianarana sy ny ankamaroan'ny vahoaka. Ny fanadihadihana ny isam-bahoaka Malagasy dia mampiseho fa misy ampahany lehibe amin'ny mponina mihitsy aza no mbola tsy voaisa anatin'ireo tatitra momba ny vahoaka. Io toe-javatra io dia tsy hitondra afa-tsy fiantraikany ratsy eo amin'ny asa fampandrosoana [fr] :
Betsaka ny isan'ny Malagasy tsy fantatry ny Fanjakana ary azo antoka fa tsy voakarakara ireo olona ireo. Tsy fanitaran-dresaka ny fitenenana fa raha tsy misy fanisam-bahoaka matetika dia mety tsy hahatratra ny fatrany mihitsy i Madagasikara.
Mety ho hita eo amin'ny fomba fandrindràna ireo tetikasa fitrandrahana nandritra ny taona vitsy lasa ny famantarana iray momba ny fakàn'ny avara-pianarana ny tombontsoa avy amin'ny fitrandrahana harena ankobon'ny tany sy ny tsy fitsinjovana ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Manome votoatiny vitsivitsy mikasika ny fomba nanatanterahan'ny Orinasa Mainland Mining ny fitrandrahana ilmenita [fr] tao amin'ny faritr'i Manakara I Jean-Luc Hariniaina sy I Serge Zafimahova:
Tompon'andraikitra taminà tsy fanarahan-dalàna goavana ny orinasa MAINLAND taorian'ny tsy firaharahiana voatsikaritra manoloana ny fanatanterahana ireo Bokin'Andraikitra momba ny Fepetra ara-tontolo iainana (CCE) sy ihany koa amin'ireo fepetran'ny lalàna sy lahatsoratra mirakitra ny lalàna Malagasy eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany [..] Nisintona ny lakolosy fanairana ny vahoakan'i Manakara manoloana ny fametrahana ny orinasa MAINLAND. Misy fihetsehan'ny vahoaka Antemoro izay ahitana ireo fahefana nentim-paharazana sy ireo fahazarana ary ireo vondrona sy olona manana fandavan-tena hanohitra ny kolikoly atao amin'ny harenan'ny vahoaka malagasy sy ny faritr'i Vatovavy Fito Vinagny. Efa natolotra an'ireo mpitondra ny tetezamita amin'ny endrika firaketana an-tsoratra ny fanapahan-kevitra noraisina io fanoherana io. Saingy, tsy tsara fandray izany ireo mpitondra ny fanjakana amin'izao fotoana.
Ilaina maika araka izany ny fametrahana rafitra tsara hijerena ny tombo-tsoam-paritra.
Ao anatinà fikarohana iray momba ny fifandraisana misy eo amin'ny asa sy ny fahantrana ao Madagasikara, manamarika i Epstein et al. fa iray amin'ireo fanalahidin'ny fivoarana maharitra ny fahazoana asa mitombina (izay midika ho asa ivelan'ny sehatra tsy manara-dalàna).
Manipika ny fiantraikan'ny fahazoana famatsiam-bola natsaraina ho an'ny tokantrano eo amin'ireo asa sy ny vola miditra, sy ny fiantraikan'ny fampiasam-bola hanorenana foto-drafitrasa any amin'ireo faritra lehibe izay afaka hanatsara ny fifandraisana anatiny eo amin'ny toekarenan'i Madagasikara, io fikarohana io. Mitanisa ireo politika afaka raisin'ny governemanta sy ireo banky foibe ihany koa io fikarohana io, isan'izany ny fepetra fampidramam-bola, ny findramam-bola mivantana, sy ny fanamafisana ny renivola miasa mba hahatonga ireo loharanom-bola halalaka kokoa ho an'ireo mpamboly sy mpandraharaha madinika.
Manantitrantitra ihany koa ny fikarohana iray hafa nataon'I Mireille Razafindrakoto sy al. fa tokony hamafisina ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka madinika ho an'izay vahaolana eritreretina. Nofaranan'izy ireo tamin'ity fanamarihana ity ny fikarohany [fr]:
Hanamafy ny fahefan'ireo vondron'avara-pianarana ny fampiasany hery. Hametraka rafitra sosialy milamina kokoa miandalana ny paikady tahaka izany saingy midika ho fanilihana ny zotra demokratika. Amin'ny lafiny hafa, ny làlana iray hafa dia ny fanamafisana ireo andrim-panjakan'ny vahoaka sy ny hanentana ny fiforonanà vondron'olona mpanelanelana mba hametraka (indray) ilay rohy tsy ampy eo amin'ny loham-panjakana sy ny vahoaka eny ifotony [..] Raha ny hevitray manokana dia azo tanterahina io làlana faharoa io, ary tsara kokoa, na dia mety ho sarotra sy hilàna fotoana aza ny fametrahana azy. Mitaky ny fananganana fanekena vaovao ara-piarahamonina eo amin'ireo mpitondra sy ny vahoaka madinik'i Madagasikara izany.
2 andro izayBorkina Faso